Ka soo qaado dukumiintiga ereyga Temporary Faylasha
Bogga ugu weyn Products DataNumen Word Repair Ka soo qaado dukumiintiga ereyga Temporary Faylasha
Isticmaalka DataNumen Word Repair si aad ugala soo baxdo dukumiintiga ereyga Temporary Faylasha
Marka dukumintigaaga Word (*. DOC ama * .DOCX file) uu waxyeelleeyo ama musuqmaasuqo sababo kala duwan awgood oo aadan ka soo kaban karin xogtii la rabay. Kadib maadaama Microsoft Word uu abuuri doono xillirary faylasha marka la shaqeynayo dukumiintiga, wali waa suurtogal in laga soo cesho xogta laga helo ereyga 'Tem tempo'rary faylasha, oo leh DataNumen Word Repair.
Microsoft Knowledgebase ayaa sharraxaysa macluumaad faahfaahsan ku saabsan xilligarary faylal ayey abuureysaa markay dokumeentiga ka shaqeyneyso. Marka markay masiibo xogta dhacdo, waad raaci kartaa macluumaadka si aad uhesho kulaylkarary faylasha laga yaabo inay ku jiraan xogta waxtarka leh, ka dibna isticmaal DataNumen Word Repair si loo baaro oo looga soo kabsado xogta feylashaan.
Hadda DataNumen Word Repair waxay taageertaa inay ka soo kabato .wbk temporary faylasha iyo .asd AutoRecovery keydi faylasha.
Wixii .wbk temporary faylasha, macluumaadka faahfaahsan waxaa laga heli karaa halkan. Caadi ahaan waxaa lagu keydin doonaa galka soo socda:
C: Dukumintiyada iyo Dejinta Data ApplicationMicrosoftWord (Windows XP)
C: Isticmaalayaasha AppDataRoamingMicrosoftWord (Wixii Windows 7)
Loogu talagalayrary faylasha, macluumaadka faahfaahsan waxaa laga heli karaa halkan. Caadi ahaan waxaa lagu keydin doonaa galka soo socda:
Si aad u sameyso soo kabashada, fadlan raac talaabooyinka hoose:
Fiiro gaar ah: Kahor soo kabashada kuleylkarary Faylka ereyga leh DataNumen Word Repair, fadlan xir Microsoft Word iyo wixii kale ee codsi ee marin u heli kara kuleylkarary faylka
Xulo tabeyaha waxyeeleeyay ama musuqmaasuqayrary Ereyga .tmp ama .asd feyl la hagaajiyo.
Waad ku dari kartaa kulaylkarary Ereyga .wbk ama .asd magaca faylka si toos ah ama dhagsii
badhan iyo dooro Dhammaan Faylasha (*.) Nooca faylka inaad caleenta iyo xulashada feylka.
Marka la eego, DataNumen Word Repair wuxuu keydin doonaa feylka go'an ee Word sida xxxx_fixed.doc, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha Word .doc feyl. Tusaale ahaan, il biyo ahrary Faylka ereyga waa ~ wrf0000.wbk, markaa magaca asalka ah ee feylka go'an wuxuu noqonayaa ~ wrf0000_fixed.doc. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
batoonka, iyo DataNumen Word Repair doonaa start iskaan iyo dayactir ku sameeynaya isharary Faylka ereyga. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha ilkaharary Faylka ereyga si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
oo waxaad furi kartaa faylka go'an si aad u aragto dukumiintiga la soo helay. Sida ku cad dukumiintiga la soo helay, waad ogaan kartaa haddii DataNumen Word Repair dib u soo ceshan karayaa wasakhdaadarary Faylka ereyga si guul leh oo hel waxaad rabto. Si kastaba ha noqotee, nooca demo ma keydin doono faylka go'an ee ereyga. Fadlan dalbo nooca oo buuxa si aad u hesho feylka.